Dib u Eegis Soodejinta ah: Qalabaynta Macluumaadka Shabakada Wanaagsan
Connotate waa software soo saarid oo cajiib ah kaas oo u sahlaya isticmaalayaasheeda inay soo saaraan ballaaran cadadka macluumaadka laga helo bogagga shabakadda. Waxay siisaa iyaga oo leh nadiifin shabakad shabakad ah oo kaa caawin karta helitaanka dhammaan xogta ay u baahan yihiin isla markiiba. Wuxuu isku daraa xawaare gaara oo leh tayo sarre leh oo ku haboon. Maareeyayaasha iyo baarayaasha webka kuwaas oo isticmaala barnaamijkan xal ka bixinta waxay yeelan karaan faa'idooyinka soo socda.
Qalabaynta Macluumaadka Shabakada Wax ku-oolka ah
Connotate waxay bixisaa sahlan sahlan, halkaas oo dadka isticmaala ay soo saari karaan dhammaan xogta ay u baahan yihiin iyaga oo aan wakhti badan qaadan. Dhab ahaan, khabiirada mashruucani waxay daryeeli karaan wax kasta, sidaas darteed baarayaasha webka maahan inay waqti badan ku qaataan ururinta dhammaan macluumaadka ay doonayaan, mana aha inay lacag badan ku qaataan barnaamijyadu inay sameeyaan shaqadooda. Iyadoo aan adeegsaneyn mareegtan, isticmaalayaashu waa inay sameeyaan dhammaan shaqada gacanta. Soo saaridda maadi ahaan waxay noqon kartaa shaqo adag oo siyaabo dhaqameed leh. Connotate waxay isticmaashaa nidaam sare oo xogta internetka ah, si loo siiyo dadka isticmaala xalka ugu fiican ee webka.
Xog ururinta xogaha laga helo bogag kala duwan ma aha hawl fudud. Connotate waxay isticmaashaa tiknoolajiyad adag waxayna ogtahay sida loo furo kartida dhabta ah ee ku jirta bogga internetka. Hadafkeedu wuxuu yahay in la xoojiyo adeegsigeeda si ay ula kulanto baahidooda macluumaadka. Isla mar ahaantaa, waxay ku dareysaa qiimaha mawduuca shirkadu u fidiso dadka isticmaala. Tusaale ahaan, waxay bixisaa falanqeyn weyn, muuqaal, boodhadhyo fudud iyo kuwo kale. Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay ka codsadaan wadatashi iyagoo siinaya tusaalooyin gaar ah ee nooca macluumaadka webka ay doonayaan inay xoqaan.
Waxay bixiyaan Wakiillo khibrad leh
Isticmaalayaasha waxay u baahan yihiin inay abuuraan wakiil Connotate leh hal riix kaliya. Intaa waxaa dheer, software-ka saaridda xogta waxay ku xiran kartaa macluumaadka si toos ah. Tani waxay ka dhigeysaa shaqada oo dhan mid aad u fudud, maadaama ay xallinayso tiro ka mid ah shirkadaha, waxay maareynayaan xuquuqda xuquuqda iyo macluumaadka ku biirida ilaha kala duwan. Wakiilada khibradda leh ee Connotate waxay fahmaan caqabadaha. Waxay ka shaqeeyeen horumarinta appka, bilowga, iyo bixiyeyaasha kale ee ganacsiga si ay uga soo kabtaan.
Automates Boqolaal Macluumaad Dheeraad ah
Connotate's data scraping software ayaa hubiya dhammaan silsiladdaada macluumaadka xogtaada, oo ay ku jiraan fiirin, isbeddel,. Awoodaha jadwalka awood leh ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysid wakiilada shakhsiyadeed iyo kooxo la mid ah wakiilada la midka ah, oo ku siinaya xakameyn ku salaysan mareegta macluumaadka webka iyo soo gudbinta. Qalabkayaga fiirinta xogta ayaan kuu soo saareynaa iyada oo ku saleysan inta jeer ee bogga la cusbooneysiiyo iyo sida ay muhiim u tahay xogta ayadoo la ilaalinayo socodka isku-dheellitirka ee nuxurka hababkaaga hoose.
Sare u qaadista Cilmi-baarista
Tiknoolajiyada casriga ah ee loo isticmaalo Connotate waxay ka caawisaa maamulayaasha iyo raadiyaha websaydhka inay abuuraan xogta iyo waxyaabaha wax soo saarka si dhakhso ah oo guul leh. Macaamiishan, macaamiishu waxay la kulmaan faa'iidooyin istiraatiji ah, xog aad u fiican iyo kharashka dhimay Source .